नाम चलेको एक वा दुई खेलाडीको उपस्थितिले कुनै पनि स्पोर्ट्स इभेन्ट वा लिगलाई व्याख्या गर्नु न्यायोचित हुँदैन «
नाम चलेको एक वा दुई खेलाडीको उपस्थितिले कुनै पनि स्पोर्ट्स इभेन्ट वा लिगलाई व्याख्या गर्नु न्यायोचित हुँदैन
अमिर अख्तर, कार्यकारी निर्देशक, एपीएल
यसै वर्ष दसैंअगाडि एभरेस्ट प्रिमियर लिग (ईपीएल) क्रिकेट प्रतियोगिता आयोजना हुँदै छ । अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद् (आईसीसी) ले पनि प्रतियोगितालाई मान्यता दिइसकेको छ । अघिल्लो वर्ष आयोजना गर्ने तयारी भए पनि कोरोनाका कारण प्रतियोगिता अन्तिम समयमा स्थगित भएको थियो । वेस्ट इन्डिजका चर्चित खेलाडी क्रिस गेल नेपाल आउने चर्चा चले पनि अन्तिम समयमा स्थगित हुँदा सम्भावना टरेको थियो । अहिले चौथो संस्करणको प्रतियोगिताको मिति तय भइसकेको छ । आयोजक एपीएलका कार्यकारी निर्देशक अमिर अख्तरले विश्वमा नाम कमाएका चर्चित खेलाडीले प्रतियोगितामा भ्रमण गर्ने बताए । उनै अख्तरसँग गरिएको कुराकानीको सार :
हरेक वर्ष इपीएललाई नयाँ गर्ने हाम्रो लक्ष्य छ । नयाँ भन्दै नयाँ खेलाडीको उपस्थिति मात्र हुँदैन । नयाँ प्रोडक्सन, नयाँ प्रस्तुति र नयाँ सोचले यसपालिको ईपीएल आगाडि बढ्ने क्रममा छ । नयाँ ईपीएल यस्तो हुनेछ कि नेपालको स्पोर्ट्स क्षेत्रलाई व्याख्या गर्ने किसिमको बनाइनेछ । खेलाडीको प्रतिभाबाहेक कार्यक्रमको उत्पादनदेखि बजार व्यवस्थापन उत्तिकै चुनौतीपूर्ण हुन्छ । यस्तै विषयले लिगलाई अगाडि बढ्न सहयोग पु¥याउँछ । पछिल्लो पटक ईपीएल आयोजना गर्दा नेपालको ट्वान्टी–२० वरियता फरक थियो । अहिले नेपाल १३ औं स्थानमा छ । नेपालजस्तो देश र हाम्रो लागि ठूलो गर्वको कुरा हो । हामीले यस्तो अवस्थालाई भरपुर सदुपयोग गर्नुपर्छ । यति मात्रले पुग्दैन हामी, अझै अगाडि बढ्नुपर्छ र दसभित्र अटाउनुपर्छ । अहिले हामी आयरल्यान्डभन्दा धेरै माथि छौं । तर, हामीले हाम्रो स्थानलाई सही सदुपयोग गर्न सकेका छैनौं ।
ईपीएलको लक्ष्य यो वर्ष कसरी यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पु-याउने । हाम्रो पन्च लाइन ‘द वल्र्ड मिस नेपाली क्रिकेट’ पनि छ । यो संस्करण हामीले टेलिभिजन हेर्ने दर्शकलाई मध्यनजर गर्दै पोडक्सनमा ध्यान दिँदै छौं । त्यसका लागि आवश्क पर्ने पूर्वाधार जस्तै क्यामेरा, लाइटदेखि प्राविधिक पाटोलाई हामीले विशेष ध्यान दिनेछौं र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा देखिने टेलिभिजनको पर्दा जस्तै बनाउने प्रयास गरेका छौं ।
कोरोनाको महामारीका कारण दर्शक मैदानमा उपस्थित नहुने भएकाले प्राविधिक पाटोमा ध्यान दिने लक्ष्य राख्नुभएको हो ?
हामीले सुरुवातबाट नै यो विषयलाई ध्यान दिएर अगाडि बढ्ने लक्ष्य बनाएका थियौं । योजना नै थियो । काम गर्दा हामीले दुई वर्षपछिको लक्ष्य के हुनेछ भनेर काम गरिरहेका छौं । सुरुवातबाट नै हामीले २०२० को संस्करणमा प्रोडक्सनमा ध्यान दिने योजना बनाएका थियौं । अघिल्ला संस्करणमा हामीले केही गरेको हो, तर केही कमी–कमजोरी भएका हुन् । कोरोनाकै कारण २०२० को संस्करण धकेलियो । २०२१ मा आयोजना हुन लागे पनि २०२० कै सम्झौताअनुसार आयोजना हुन लागेको हो । दर्शक उपस्थित हुने नहुने अन्योल एक दिन अवश्य थियो । यसैलाई ध्यान राखेर हामीले प्रोडक्सनमा विशेष ध्यान दिएका थियौं । प्रोडक्सनबाट नै नेपाली स्पोर्ट्सलाई परिवर्तन गर्न चाहन्छौं, जसले गर्दा प्रत्यक्ष प्रसारण गर्दा प्रोडक्सनमा ध्यान दिनुपर्छ भन्ने सन्देश दिन चाहन्छौं ।
राम्रो प्रोडक्सन भयो भने हामीले नेपाली स्पोर्ट्सका प्रतिभावान् खेलाडीलाई विश्वभर चिनाउन सक्छौं । यसलाई ध्यान सक्यौं भने नेपाली क्रिकेटका लुकेका प्रतिभावान् खेलाडी विश्वमा चिनिन सक्छन् । यो वर्ष ईपीएलले १ सय ५५ भन्दा बढि देशमा प्रसारण गर्ने प्रयासमा छ । यसै कारण नेपालको मैदानमा हुने खेललाई नेपालभन्दा बाहिर भएको नेपालीले सहजै रूपमा हेर्न पाउनेछन्, ईपीएलको प्लेटफर्मबाट ।
नाम चलेको एक वा दुई खेलाडीको उपस्थितिले कुनै पनि स्पोर्ट्स इभेन्ट वा लिगलाई व्याख्या गर्नु न्यायोचित हुँदैन, गर्नु पनि हुँदैन । हामीलाई चर्चित खेलाडी ल्याएर प्रतियोगिता खेलाउन मन छ । क्रिस गेल आएर ईपीएल नै माथि जान्छ भन्ने सोच गलत हो । हाम्रो आफ्नो समझदारी छ । क्रिस गेल आए प्रतियोगिता रंगीन हुन्छ । राम्रो हुन्छ । अनि विश्व क्रिकेटमा विश्वको नम्बर एक खेलाडी नेपालमा गएर क्रिकेट खेल्यो भन्ने सन्देश पनि पुग्छ । त्यसमा आर्थिक पाटो पनि रहन्छ । आइहाल्दैमा राम्रो हुन्छ भन्ने मात्र पनि हुँदैन । क्रिस गेलको विषयमा भारतमा आयोजना हुने इन्डियन प्रिमियर लिग (आईपीएल) को तालिकाले पनि फरक पार्छ । तालिका नजुधे क्रिस गेल नेपाल भ्रमण गर्न निकै इच्छुक छन् ।
यो वर्ष आयोजना हुने प्रतियोगिताका लागि नेपालमा विश्व चर्चित खेलाडीको उपस्थिति हुनेछन् । पूरा गर्नुपर्ने सबै मापदण्ड पूरा भएपछि मात्र खेलाडी नेपाल प्रवेश गर्नेछ । हाम्रो देश बराबर भएका खेलाडीको उपस्थितिभन्दा टेस्ट खेल्ने राष्ट्रका अझ चर्चित खेलाडीलाई अनुबन्ध गर्ने तयारी भइरहेको छ । एसोसियट देशका खेलाडी नलिने भन्ने सोचमा पुगेका छौं । एसोसियट राष्ट्रका खेलाडीभन्दा टेस्ट राष्ट्रका खेलाडीलाई ल्याएर लिगलाई अभैm अगाडि बढाउन चाहन्छौं । इङ्ल्यान्ड, पाकिस्तान, दक्षिण अफ्रिका, वेस्ट इन्डिज, श्रीलंकाजस्ता देशबाट हामी खेलाडी ल्याउने प्रयास गरेका छौं ।
लुकेका प्रतिभालाई उजागर गर्ने लक्ष्य ईपीएलको हो भन्दै आउनुभएको छ । तीन संस्करण पूरा गर्दा लुकेका प्रतिभा भेट्ने लक्ष्य पूरा भएको छ ?
यो लिग उदय हुँदै गरेका खेलाडीका लागि हो, कुनै चर्चित खेलाडीका लागि हैन । नेपालको ठूलो खेलाडीका लागि यो प्रतियोगिता होइन । ठूलो खेलाडीले क्रिकेटमा स्थान बनाइसकेको छ । नाम कमाइसकेका छन् । यो लिग विल्कुल नयाँ खेलाडीका लागि हो । नयाँ खेलाडीलाई दिइएको प्लेटफर्म हो । हाम्रो लक्ष्य छ ट्यालेन्ट हन्ट, जुन हामीले गरिरहेका छौं र हरेक फ्रेन्चाइज टोलीले गर्छ, त्यो उनै उदाउँदै गरेका खेलाडीका लागि हो । त्यसका अतिरिक्त हामीले स्पेसल ट्यालेन्टलाई पनि समावेश गरेका छौं । यो संस्करणमा कम्तीमा पनि ३ देखि ४ नयाँ चर्चित नयाँ खेलाडीको नाम दर्शकले सुन्न पाउनुहुनेछ ।
चौथो संस्करणसम्म आइपुग्दा यत्रो ठूलो प्रतियोगिता आयोजना गर्दा विज्ञापन दिनेदेखि लगानीकर्ताको लगानी ठूलो अर्थ राख्ने गरेको छ । तीन संस्करण आयोजना गर्दा र एपीएल आयोजना गर्दा चुनौती केके अनुभव गर्नुभएको छ ? अहिलेको अवस्था कस्तो छ ?
चुनौती कहिल्यै पनि बन्द हुँदैन । आगामी दिनमा अगाडि बढ्दै जाँदा चुनौति अझै थपिँदै जान्छ । २०१६ को चुनौती र २०२१ को चुनौतिमा धेरै फरक छ । २०१६ मा स्थापना हुनुको चुनौती धेरै थियो । नयाँ योजना र कार्यक्रमको चुनौती थियो । विश्वासको कुरा थियो । २०२१ मा हामी सबैले खेपेको चुनौती कोभिड–१९ को रहेको छ । प्रतियोगिता हुने नहुने अनिश्चितता छ । दिन दुई गुना र रात चौगुना चुनौतीहरू थपिएका छन् । केही दिनमा वा केही साता वा केही महिनामा नै समाधान हुने संकेत देखिएको छैन । यद्यपि हामी अगाडि बढ्नु नै छ । डेढ वर्षदेखि हामी कोरोनाबाट बाँच्न संघर्ष गरिरहेका छौं ।
स्पोर्ट्स भनेको चलायमान क्षेत्र हो । मानिस–मानिसमा खेलले एक सूत्रका बाँध्न सक्छ । सकारात्मक ऊर्जा दिन सक्छ, तर पनि मार्केट फराकिलो छ । कसैसँग दीर्घकालीन योजना छ । लगानीकर्तालाई लगानी गर्ने विश्वास दिलाउन सक्ने क्षमता हुने हुँदा मार्केट सहज छ । ईपीएलको कुरा गर्दा मल्टिनेसनल ब्रान्डहरू जोडिएका छन् । ईपीएल कुन दिशामा गइरहेको छ र कुन लक्ष्यका साथ अगाडि बढेको छ, लगानीकर्ताले ईपीएललाई मूल्यांकन गरिसक्नुभाको छ ।